Jaal Marroo ፡ Ajajaan WBO Zoonii Lixaa, shira Maqaa Araraatiin Moot. Abiy Ahmed xaxee socho’aa jiruuf, deebii kennee jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJaal Marroo ፡ Ajajaan WBO Zoonii Lixaa, shira Maqaa Araraatiin Moot. Abiy Ahmed xaxee socho’aa jiruuf, deebii kennee jira.
Jaal Marroo ፡ Ajajaan WBO Zoonii Lixaa, shira Maqaa Araraatiin Moot. Abiy Ahmed xaxee socho’aa jiruuf, deebii kennee jira.
~ Jaal Marroo ፡~ Ajajaan WBO Zoonii Lixaa, shira Maqaa Araraatiin Moot. Abiy Ahmed xaxee socho’aa jiruuf, deebii kennee jira.
~“WBOn Kaayyoon inni manaa baheef qaba.
1. Mootummaa Gabroomfataa Oromiyaa
irraa kaasee biyya Oromiyaa walabaa
2. Ummata Oromoo Bilisoomsuudha,
3. Finfinnee irratti Bilisummaan Alaabaa
Oromiyaa gadi dhaabuudha,
4. Oromiyaa waggaa 150 oliif gabrummaa
jala turte ummata Oromoo waliin
Gabrummaa jalaa baasee Biyya Oromiyaa
birmadummaa ishee mirkanneeffatte
5. Finfinnee, Dirree Dhawaa, Walloo, Raayyaa
Harar… Bilisummaan Oromiyaa jalatti
6. Oromiyaa irratti Mootummaa ummata
Oromoo Bilisummaan hundeessudha,
7. Walumaagalatti Oromiyaa Ethiopia irra
Walabummaa Labsatte (fottoqte) Biyya
8. Kanaaf osoo kaayyoon ganama WBOn
manaa baheef hin guutamiin ammaf
Mootummaa Oromiyaa diigee Ethiopia Afaan
tokko, Ethiopia Aadaa tokko, Ethiopia
Amantaa tokko, Ethiopia takkitti Sirna Milinik
Nafxega jalatti ijaaraa jiru waliin araara wanti
jadhamu goongumaa hin jiru hin įiraatu!!
9. Qabsoon WBO, Qabsoon ummata Oromoo,
Qabsoon Qeerroo Oromiyaa hanga
Bilisummaa Oromoof Walabummaa
Oromiyaatti itti fufa!”Hoogganaa Olaanaa Waraana Bilisummaa
Oromoo (WBO) irraa!!Walif Dabarsaa! Garee Bilxiginnaa qabsoo
ummata Oromoo maqaa araaraan
balleessuuf, hoogganoota WBO ajjeessuuf
Tarsiimoo maqaa araaraa jadhamu
baafattee ittin sochoo’aa jirtu biraan ga’aa!!
Barana taatu Filannoon!
Diddu hidhannoon Mootummaa ummata
Oromoo hundeessuun dirqamal!
Kennaa Warra Galaan
Warra Maqaa Sheekkoleetiin Masaraa Minilk 4Kiiloo Deddeebitu Hundashee hin amaninaa. Sheekiis ta’e Qeesiin Habashaan Habashuma Najisa hin Xahaaramtu.
Daniel Kibretiifi Sheekichoo!! pic.twitter.com/p2HMbwxuj2
— Kichuu (@kichuu24) March 7, 2020
This is what real victory looks like Mr.@AbiyAhmedAli
alienating #Oromo ppl and offending #Somalis while pleasing your #Amhara cousins isn’t the way forward. YOU JUS SHOWED YOUR TRUE COLOR. pic.twitter.com/jxUbv05zyA
— Ogaden Online (@ogadenonline) March 6, 2020
Marii Jaal MARROO (Ajajaa WBO Konyaa Lixaa) waliin, dhimmoota yeroo’rratti taasifne | RSWO – Bitootessa 5, 2020 https://t.co/qRfCs3zvCo pic.twitter.com/AvyCuJdVjj
— Kichuu (@kichuu24) March 5, 2020
Viva dhugaa barbaaduuf/Lammii Taayyee Fidaa (Abbaa Furtuu) eenyu?
Lammiin Taayyee (2016-2020) bara 2016 yeroo FDG Oromiyaa keessatti haalaan jabaataa dhufetti sabboontota ijaaruun tikoota mootummaa kan maqaan isaanii Abiyootiifi Habtaamuu ykn Garjeedaa Girmaa (hiisisanii ragaa irratti ba’uun kan beekamani) jedhamaniif gumaachaa kan ture yoo ta’u, garee galmee Abarraa Lammii Dooreen waamamaa turekan garee Poolisoota Finfinnee sabboontota ta’anii warra Lammii Taayyee(Abbaa Furtuu) Maayikelaawwiifi Qiliinxoof gumaachaman keessaa isaan tokkodha. Ijaaree gumaachaan yoo alatti hafe, irratti waan beekamuuf yeroo muraasaaf Maayikelaawwii join godhee ture. Wanni inni yeroo Maayikalaawwii keessa ture dubbataa tureefi wanni inni amma itti jiru tokkodha. Marsaa tokkoof WFDO bakka bu’ee naannoo Dambi Doollootti dorgomee kan ture ta’uufi yeruma sanarraa kaasee Qabsoo Oromoo ganeera.
Turtii isaa Maayikalaawwii keessa turetti:-
Paartiileen siyaasaa Oromoo Oromoo ceesisuu hin danda’an
#ABOn qabsoo sabaa ganeera, kanaaf Paartii guddaa Maquma ABO jedhuun dhaabna,…
Lammiin guyyaa waamama(qoratama). Warri kaan halkan qoratamu.
Lammiin carraa barnootaaf waggaa lamaaf Keeniyaa tureen dhufe kan ofiin jedhu (Keeniyaa keessatti hojii tikaa irratti bobba’ee ture), biyya seennaan Muktaar Kadir waliin ta’uun Diaspora Oromoo irratti xiyyeeffannoon hojii eegale. Waldaa Aksiyoonaa “Oromo Diaspora Construction PLC” jedhu hundeessuun yeroo haalaan hamtuu bara 2016 Oromoon gara biyyaatti akka dacha’uuf hojii jajjabaa hojjetaa ture. Naannoo Sabbataatti Qotee bulaan Beenyaa guddaa isiniif kaffalla jechuun uummata buqqisee lafaaf qabeenya malee hambiseera.Lammiin turtii yeroo muraasaan booda ergama Rattaafi Takilaayi irraa fudhachuun ba’ee hojii idilee isaatti kan deebi’e yoo ta’u, Tikoota waliin hojjetaa tures ijoollee ofii qabsiise irratti ragaa akka ba’an taasise. Sirni inni waliin hojjetaa ture diigamnaan, walitti qabaa boordii FIB ta’uun as ba’e.
Dudduubni nama kanaas haalaan fokkisaadha. Umuriin isaa fuudhaaf akkuma ga’een maatiin isaa shamarree Sabboontuu itti fuudhani. Ishii waliin bultii ijaarratee ijoollee lama erga irraa dhalchee Obboleettii haadha manaa isaa ishii xiqqoo waliin walitti dhufeenya eegala. Achumaan haadha manaa isaas, ijoollee isaas achitti gatuun micayyoo xiqqittii kana fudhatee biyyaa bade. Boodarra mana haati manaa isaafi ijoolleen isaa keessa jiraatan deemee qooddachuun irratti gurgursiisee, haadha ijoollee isaa jireenya gadadoof saaxile. Nama akkanaatu, WBO hiikkachiisuun mootummaatti harka kennachiisee nagaa buusuf socho’aa jira.
Hubadhaa Sabboontotaaf deggertooti ABO fi WBO akkasumas WBOn hundi !
Koree Araaraa moo Koree gidiraa?
Gareen tokko “mootummaafi WBO walittan araarsa” jedhee as ba’eera. Irra keessoon isaa araara, keessoon isaa shira gidiraadha. Gareen kun namoota uummata Oromoo biraa jaalala qaban muraasa hammatee deema. Maqaa namoota kanaatiin daldalu.
Namoonni jaallatamoon garee kana keessatti hammataman ajandaa guddaa “araara WBO fi mootummaa” jedhu kana quba hin qaban. Kan itti himame:
– komand postiin akka Lixaafi Kibba Oromiyaarraa ka’u gaafachuu,
– mootummaan waraana isaa uummata keessaa akka baasu gaafachuu,
– hidhaafi ajjeechaan akka dhaabatu mootummaa gaafachuu,
– warri hidhaman akka hiikaman dhiibbaa gochuu fa’a.
Garee kana keessatti kan hammataman kan akka artist Ilfinesh Qannoo fi Massaluu Taarikuu (Funyee) isaan tokkodha.
Yeroo darbe odeeffannoo koree araaraa kana akkuma arganneen Artist Ilfinesh Qannoo gaafannee turre. Ilfinesh waan araara WBO fi mootummaa jedhu kana akka quba hin qabne nuuf himte. “Gogaa Leencaa ofirraa baasee gogaa Saree hin uffadhu” kan jedhu deebii ishee isa gabaabaa ture. Kanuma waliin mootummaan dhiibbaa irratti gochaa akka jiruufi “ABO waliin hin deemiin” jedhanii akka akeekkachiisan dubbatti. Sababa kanaaf dhiyootti biyya kanaa akka deemuuf jettu dubbatte. Kana malees Artist Funyee gaafannee dhimma kana akka quba hin qabne nuuf himtee jirti. Kan isheen quba qabdu waan biraati. “Uummata Wallaggaa fi Gujii irraa komand postiin akka ka’u gaafanna, hidhaa fi ajjeechaan akka dhaabbatuufi kan hidhaman akka hiikaman gaafachuu” kan jedhu qofa akka quba qabdu Funyeen himtee jirti.
Faallaa kanaa garuu koreen maqaa araaraan dhaabbate jedhamu kun “caasaa mootummaa kan Godinaa, Aanaa fi magaalotaa diigamee ture bakkatti deebisuu fi WBO hidhannoo hiikkachiisuu” jedhee hundeeffame hojii eegaluu isaa ibsee jira. Kana jechuun waan mootummaan dadhabeefi akeeka mootummaa galmaan ga’uu akka of keessaa qaban kan ibsudha.
Duuba shira kanaa eenyu jira?
Shira kana kan qindeessu namoota akka Leencoo Lataafi Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir fa’a.
Obbo Leencoo Lataa tibba darbe OMN irratti waan inni haasa’e yaadattu yoo ta’e dhimma araara kanaa gad jabeessee dubbata. “Fedhiin ijoollee bosonatti hafanii gaafatamee araarri bu’uu qaba” jedha. Waggaa darbe ammoo “ijoolleen bosantti hafte kun waan isheen barbaadduyyu namaaf hin galu, fedhii addaa warra qabanidha waan ta’eef isaan waliin wanti mari’atamu hin jiru” jedhee ture. Ittuma fufuun obbo Leencoon “ABOn as Finfinnee jiruufi waraanni bosona jiru [WBO] hariiroo qabu, ni shakkina” jedhe. Utuu oolee hin buliin hogganoonni ABO hidhamanii Jaal Abdii Raggaasaa achi buuteen dhabame.
Kana malees gorsaan dhimma nageenyaa Oromiyaa Abbabaa Garasuu kanuma mirkaneesse. “Waraana bosona jiru kan ajaju ABO as Finfinnee jirudha; Daawud Ibsaatu gaafatama” jedhee ture. Kanuma sababa godhachuun hogganoonni ABO hidhaman.
Koreen maqaa araaraan hundaa’e kun akka ibsetti “hidhannoo hiikkachuun WBO mariif hin dhiyaatu” jedha. Kana jechuun fedhii mootummaa kanaa guutummaatti kan galmaan ga’udha. “Caasaa mootummaa ijaaruuf hojjenna” jedha. Fedhii mootummaa kan guutu malee gaaffii WBOn dhiyeessu kan giddu galeessa godhate miti.
Wanti gaaffii namatti ta’u:
– Koree nama 13 qaba jedhame kanaaf maaliif yaada bu’uureffama koree sanaa ibsuurra maaliif waan gaarii qofa ibsan? Akka WBOtti jaarsummaa deeman maaliif himne?
– Namoota haga tokko uummata biraa kabaja qaban shira kanaaf fayyadaman?
– WBO hidhannoo hiiksisuufi caasaa mootummaa deebisuun ajandaa isaanii isa duraa maaliif ta’e?
– Koreen kun humna ittiin mootummaa irratti dhiibbaa godhee yaada furmaataa uummanni barbaadu fidu qabaa?
Akka ani yaadutti, namoota kabajaa qaban kana fayyadamanii shira isaaniitti milkaa’uu barbaadaniiti. Yoo dursanii WBOtti jaarsummaa akka deeman ibsan jarri kun diduu danda’u jedhanii waan yaadaniif yaada isaan fedhan qofa itti himan. Koreen kun fedhii mootummaa dursa. Mootummaan yaada koreen kun dhiyeessu yoo dide humna ittiin mootummaarratti dhiibbaa godhan hin qaban.
Wanti hubatamuu qabu:
Itti Aanaan Itaamaajor Shuumii Raayyaa Ittisa Biyyaa J/Biraanuu Juulaa “waraana bosona jiru kana waliin wanti mari’annu hin jiru; amma isaan dhabamsiisaa jirra; uummata keessaa baasneerra; nama muraasatu hafe” jedhee ture. Har’a eenyu waliin mariin geggeeffama?
Abbabaa Garasuu “Gujii fi Booranni guyyaa 15 keessatti waraana bosona jiru keessaa baafnee amma bilisoomeera; Wallaggas akkasuma” jedhee ture. Erga waraana bosona jiru balleessanii araarri eenyu waliini?
Dhimma araaraa kana isa darberraa maal baranna?
Namoonni adda durummaan waan kana qindeessan warra WBO hin jaallanne kanneen bara 2008 ABO irraa of baasan kan akka Leencoo Lataafi Abbaa Biyyaa Abbaa Joobir fa’a. Koree tekinikaa isa darbe waliin wal fakkaataadha. Xiyyeeffannaan isaanii:
– Gara mootummaa goranii shira uummata Oromoo abdii kutachiisuun WBO dhabamsiisuudha.
– Namoota uummata biraa kabaja qaban kan akka Ilfinesh Qannoo, Dr Gammachuu Magarsaa, Funyee, Dr. Abbabaa fa’a uummata biratti jibbisiisuudha
Oromo Music 2020 Jambo Jote Jira Jirtu Sabo Koo New 2020 Songs
በትግራይ ኤርትራውያን የሚገኙበት c ሊዘጋ ነው መባላቸውን ስደተኞች ተናገሩ